ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၆) - Myanmar Network
ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၆)
Posted by Language Republic on December 19, 2014 at 18:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၆) မှာတော့ bald asacoot, bare-faced, bank holiday နှင့် barbecue တို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ သမိုင်းနှင့် ဥပမာများကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
ထိပ်ပြောင်တဲ့ သူတွေကို သရုပ်ဖေါ်တဲ့အခါ bald asacoot လို့ ပြောကြပါတယ်။ coot ဆိုတာ ရေကြက်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး နှုတ်သီးအဖြူရောင်ရှိကာ ဦးခေါင်းအရှေ့ပိုင်းမှာ shield လိုမျိုး အကွက်ကြီးတစ်ခုရှိတော့ ကြည့်လိုက်ရင် အမွှေးမပေါက်ဘဲ ထိပ်ပြောင်တဲ့ ပုံထွက်နေတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ‘as bald asacoot’ ဆိုရင် လုံးဝ ထိပ်ပြောင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့နော်။ ဒီစကားက ၁၅ ရာစု လောက်ကတည်းက ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်(အထူးသဖြင့် အားနည်းချက်) ကိုဒီလိုမျိုး coot နဲ့ နှိုင်းယှဉ် သရုပ်ဖေါ် ပြောတာကတော့ လှောင်ပြောင်တဲ့ သဘောသက်ရောက်တာမို့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ အချင်းချင်းကလွဲရင် အခြားသူတွေ အပေါ် မသုံးဖို့တော့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စကားပြောရာမှာကိုယ်သုံးရမဲ့ အသုံးကိုမသေချာရင်တော့ bald ကိုဘဲတစ်လုံးထဲသုံးပါလေ။
When he took off his hat, we saw that he was as bald asacoot!
My grandfather is as bald asacoot.
မျက်နှာပြောင်တိုက်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ bare-faced ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ negative meaning ရှိပြီး ကြီးကျယ်သူ၊ မညှာတာတတ်သူ ၊ ကပ်ဖားတတ်သူတွေကိုသရုပ်ဖေါ်ဖို့ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကတော့ bare-faced ရဲ့ရှေးရှေးတုန်းက မူလအဓိပ္ပါယ်ကတော့ လုံးဝကိုpositive meaning ရှိပြီး ရိုးသားပွင့်လင်းမှု ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာမှာ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးတို့ ကင်းစင်ပြီး plain ဖြစ်နေတဲ့အခါ မျက်နှာကို ဘာနဲ့မှ ဖုံးကွယ်ထားတာမျိုး မရှိသလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ပွင့်လင်းမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး သက်ရောက် တာပေါ့နော်။ စကားတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ခေတ်ကိုလိုက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မှတ်သားစရာဘဲနော်။
We make things too easy for ourselves if we regard suchastatement asabarefaced lie.
Mornings wereatime of barefaced lies and outrageous excuses.
Bank Holiday ဆိုတာအများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ခေါ်တဲ့ public holiday ဆိုတာတွေ မသတ်မှတ်ခင်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ National holiday လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၁၈၃၀ မတိုင်ခင်အထိ the Bank of England က တစ်နှစ်ကို တရားဝင် အားလပ်ရက်ပေါင်း ရက်၄၀ အထိ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အခြားသော အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်တွေ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းBank Holidayကို ၁၈ ရက်အထိလျှော့ချခဲ့ပြီး ၁၈၃၄ ခုနှစ်မှာတော့ လေးရက်သာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ခဲ့ပြီးအများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်မြဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
I took the box number to report the problem but the post office customer service line was closed due to the bank holiday.
Analysts said volumes were more likeabank holiday thanaworking day.
A bank holiday isaday on which the banks are on holiday, but on everyone else has to go to work.
ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံး barbecue ဟာ West Indies မှာယနေ့တိုင် သုံးစွဲနေတဲ့ စပိန်စကား barbacoa လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်လေးတိုင်ပေါ်မှာ ဆင်ထားတဲ့ သစ်သားဘောင် ကနေလာတာပါ။ အဲ့ဒီ idea ကနေပြီးတော့ သစ်သား ကုတင်ကိုလည်း ဒီအတိုင်းဘဲခေါ်သလို သံဘောင်နဲ့ ပြုလုပ်ထား ပြီဲး့ ကြီးမားတဲ့ သားကောင်ကို ကင်လို့ ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ မီးသွေးမီးဖိုကို ပါခေါ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ရေးဆိုင်ရာ cooking device တွေထဲက barbecue ဟာ အ်ိမ်အပြင်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ outdoor ပါတီတွေမှာ ချက်ပြုတ် စီမံစားသောက်တဲ့ device တစ်ခုအဖြစ် တွင်ကျယ်နေပါတယ်။
On my last day in Australia, my parents cooked meabarbecue in their backyard barbecue area.
He made some salads to have with the barbecue.
Real, slow-cooked barbecue takes time, but this dish is truly worth it.
Permalink Reply by Ashin Parmaukkha on January 10, 2015 at 11:39
Permalink Reply by Mg Shine on January 10, 2015 at 13:03
That makes my skill improved so thankalot!
Permalink Reply by thantzin on January 10, 2015 at 14:45
Permalink Reply by Daw Khin Mar San on January 10, 2015 at 14:51
Permalink Reply by Zarni Lin on January 12, 2015 at 6:35
I'd like to suggest you that I need some political words to understand this transitional period in our country ...thanks sir...
regards with Zarni Lin.
Permalink Reply by thiridon77@gmail.com on January 12, 2015 at 15:07
Permalink Reply by san san hlaing on January 12, 2015 at 21:56
Permalink Reply by Daungaung Aung on January 12, 2015 at 22:37
Meanings of the familier words and sayings come to be known clearer than ever .Many thanks!
Permalink Reply by khaingzarmon on January 12, 2015 at 23:46
Permalink Reply by Than Nwe on January 13, 2015 at 10:33